Pyae Phyo (MMiTD): ♪ Mi တစ်​လုံးကိုင်​ထားတယ်​ဆိုရင်​ Copy လုပ်​ပြီးသာသိမ်းထားလိုက်​​တော့ ♫
♪ Mi တစ်​လုံးကိုင်​ထားတယ်​ဆိုရင်​ Copy လုပ်​ပြီးသာသိမ်းထားလိုက်​​တော့ ♫
Baisc Reboot ဘယ်လိုဖုန်းကိုပိတ်လို့ရတယ်
၁။ power button ခဏလေးမိထားမယ်ဆိုရင် select reboot လေးရွေးနှိပ်ပြီးမယ်
၂။ power button လေးကိုနှိပ်ထားမယ် ဖုန်းပိတ်သွားတဲ့အထိ အဲ့လိုလေးလဲရတယ်
how to change device name?
ကိုယ်အသုံးပြု တဲ့ ဖုန်းနာမည်ပြောင်းမယ်
၁။ ဖုန်း device setting , tap About phone ,device name ... အဲ့မှာကိုယ်ပေးချင်နဲ့နာမည်လေးပေးလို့ ရပါပြီဗျာ။
ဖုန်းကိုပိတ်ထားမယ် ဖွင့်ရင်power key နဲ့ ပဲအသုံးမပြု ချင်ဖူးဆိုရင် volume keys ရောအဆင်ပြေပါတယ်။
၁။ device setting > Additional settings > Buttons
၂။ အဲ့မှာ slide the wake with volumes switch on position
အဲ့လိုဆိုရင် screen on ရင် power key မှ မဟုတ်ပါဘူး volume key နဲ့လဲ အဆင်ပြေပါပြီ
how to enable the developer options?
ကွန်ပျူ တာနဲ့ချိတ်မယ်သူများ ဟီး
၁။ device settings > tap about phone
၂။ Tap on MIUI verdion fot7times.
၃။ go to your device's settings > Additional settings to find the Developer options တွေ့ပြီပေါ့နော်။
အင်တာနက် အပိုင်း homepage နဲ့ startup page ကျန်ကျောင်းစာ တွေနဲ့မမြင်ချင်ဘူး ကိုယ်လဲနားမလည်ဘူးလေနော်။ အဲ့တော့ google ကြီးပေါ့နော်။
၁။ Open the browser app. ဖွင့်မယ်
၂။ tap the Menu button > settings > Advanced > set start page> Custom.
၃။ EnteraURL and tap OK.ပေါဗျာ
အဲ့မှာကိုယ်ကဘာသုံးမှာလဲ search engine.
google လာ baidu , yahoo, ကိုယ်အသုံးပြု တဲ့ဟာ မိမိသဘောပေါ့။
how to quickly switch between opened tabs?
၁။ open browser... *default browser နော် ဖုန်းမှာ original ပါတဲ့ဟာနော်
၂။ tap the Menu button (button of the screen) settings ကိုနှိပ်မယ်
၃။ Slide the ( swipe.from edge to switch tabs ) on ထားမယ်
၄။ you can now swipe from the left and right. အဲ့တော့ tap ကိုနှိပ်လိုက်ရင် ကိုယ်အသုံးပြု တဲ့ page ကို left ,right... ရွေးလိုရပြီပေါ့နော်။
How to switch to night mode?
1. open the browser app
2. tap the Menu button at the boyton of the screen
3. tap night mide ..
အဲ့ဒါလေကတော့ ညအိမ်ရာထဲမှာ အသုံးပြု ရင်တော်တော်အဆင်ပြေပါတယ်။
How to close all tabs?
1, in the browser, tap the Tab button at the bottom of the screen.
2, Tap X close all.
How to enable reader mode?
အဲ့ဒါလေတော့ ကျွန်တော်ကြိုက်တယ်ဗျာ။ စာဖတ်တဲ့အခါအဆင်ပြေတယ်
2. go to web page.....
3. Tap the reader mode button in address bar . စာအုပ်ပုံ logo လေးနဲ့ အဲ့မှာနှိပ်လိုက်မယ် အဲ့လိုဆိုရင် အမြင်ပြောင်းသွား edit, လေးမျိုးရှိသေးတယ် အထဲမှာ theme setting ပြောင်းမယ် font settings စာလုံးကြီးမယ် သေးမယ်။ add bookmark မှတ်ထားမယ်။ နောက် recent ထဲမှာ add to home scree , V/H screen , Nightmode, exit. အဲ့ဒါလေးတွေပါတယ်ခင်ဗျာ။
အဲ့ဒါလေးတော့ good တယ်ဗျာ။ game ကစားတဲ့အချိန် video ကြည်တဲ့အချိန် အဆင်ပြေတယ်။ adjust လုပ်လို့ရသေးတယ် ဥပမာ ကိုယ်ကစားတဲ့ game နဲ့ video app တွေမှာ အလုပ်ပေးမလုပ်စေချင်ဘူးဆိုရင်ပေါ့နော်။
1. open the Toogle panel from the top the screen .
2. Tap the Buttons toggle. The navigation buttons will now be disabled.
3. To re-enable the navigation buttons, top the Buttons toggle again. or double-tap any one of the navigation buttons.
ဖုန်းအပေါ်ကနေဆွဲလိုက်မယ် MIUI 8 မှာ
Notification & toggles layout .
combined လား Separate လား။ ကိုယ်သုံးတဲ့ပေါ်မှာမူတည်တယ်လေနော်။ တကယ်လိုseparate လုပ်ပြီးသုံးရင်တော့ date ပြတဲ့နေရာမှာ setting မရှိတော့ဘူး ။ Combined နဲ့သုံးတယ်ဆိုရင်တော့ setting လေးရှိမယ်။
ကယ် adjust ကိစ္စထက်ဆက်မယ်။
How to adjust and turn off the navigation button backlights?
1. device's settings > tap Additional settings >Buttons.
2. Tap keep button lights on to adjust for how long youwant the light to be on.
3. Slide the Button lights switch to left to swith them off.
အဲ့ဒါလေကတော့ Button lights မီးလေးလင်းချင်တဲ့သူတွေ on , off လုပ်လိုရမယ်
နောက်ထက်ပြီးတော့ Long press Navigation buttons. buttons သုံးခုရှိတယ် ဟုတ်တယ်နော်။
Recent(menu) . Home . Back
အဲ့သုံးခုကို long press နဲ့သုံးမယ် ဥပမာ့့
ကျွန်တော်ကတော့ back key ကို long press ကို close current app နဲ့သုံးတယ် facebook သုံးနေတယ်ဆိုပါစို့ back key ကို long press နှိပ်လိုက်ရင် တခါထဲထွက်သွားမယ် ပိတ်သွားမယ်။ အဲ့လိုလေးပေါ့ဗျာ။
ကယ်နောက်တစ်ခု အပေါ်ကကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ အတိုင်းကိုယ် game app သို့မဟုတ် video palyer အသုံးပြု တယ်။ button keys.. တစ်ခါထဲပိတ်ထားနိုင်တယ်ဗျာ။ ခဏခဏ ရွေးစရာမလိုဘူးလေနော။
How to disable the navigation buttons automatically when usingaspecific app?
1. device's setting > tap Addition setting > Buttons > Automatically disable navigation buttons.
2. Pick an app. ကိုယ်သုံးတဲ့ game , video player ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ဟာပါ့နော်
3. select always disable. ရွေးထားလိုက်ရင် okay ပေါ့ဗျာ။
how to trun off camera sound?
2. Tap modes > settings button > (in upper right corner)
3, slide the Camera sounds switch to the off position.
camera setting တော့ ကိုယ်ဟာကိုလေ့လာကြည့်လိုက်နော်။ ကျွန်တော် video edit အပိုင်းအရင်လေ့လာနေသေးတယ်။ camera အပိုင်း မရောက်သေးလို့
How to use your voice to take picture ?
1, open the camera app.
2. Tap Modes > Audio.
3. Say any words such as `smile´ or `Cheese´ the camera will begin counting down, and then the picture at the end of the countdown.
ကိုယ်ပေးချင်နဲ့ အသံ မိမိသဘောပေါ့နော်။ effect အပိုင်းကိုယ်ဟာကိုနည်းနည်းလေးလာကြည့်ပေါ့နော်။
How to delete multiple contacts?
တစ်ခုချင်း delete လို့အဆင်ပြေတယ်စေတယ်ဗျာ
1. device setting > tap system apps > Contacts > Delete batch .
2. select the contacts you want to delete, and then tap delete.
နောက်တစ်ခု ကိုယ့်ပါရမီဖြည့်ဖက် သို့မဟုတ် ချစ်ချစ် သို့မဟုတ် အမျိုးတွေ နံပါတ်ကို ringtone အတွက်
How to setaunique ringtone foracontact?
2. Tapacontact
3. Tap Default ringtone
4. Tap Apply next to the ringtone you want.
နောက်တစ်ခု sim card contacts အပိုင်း
Show my sim card contacts
1. device settings > tap system apps > contacts > display preferences.
2. slide the show sim contacts switch to the on position.
အဲ့ဒါဆိုရင် contacts မှာ sim ထဲမှတ်ထားတဲ့နံပါတ်မြင်ရပြီဗျာ။
နောက်ပြီး hide contacts without numbers.
1, device setting > tap system apps > contacts > display preferences.
2. slide the hide incomplete numbers switch to the on position. .
နောက်တစ်ခု sim card မှာ ဖုန်းနံပါတ်မှတ်ထားမယ်
Createacontact in sim card.
2, tap + in the lower right corner
3. tap the drop-down menu in the upper center, and select Save to sim card.
အဲ့လိုလေးဆိုရင် အားလုံးအဆင်ပြေမယ်လို့ထင်တယ်။ ကျန်တ
ဲ့ Clock ,
Home screen ,
Lock screen and password,
Netwotk and Connections.
Notificaton and status bar.
နောက်မှဆက်တော့မယ်နော့်ကျွန်တော်လိုတဲ့အပိုင်းတွေရှိခဲ့တယ်ဆိုရင့် သိတဲ့ ကိုကို ။ မမ ။ ညီလေး။ ညီမလေးများ ထက်ဖြည့်ပေးစေချင်တယ်ဗျာ။ xiaomi အသုံးပြု တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ အားလုံးအဆင်ပြေအောင်လို့ပါ။
ကျွန်တော်ကျန်တဲ့ 15မျိုးနောက်လာမယ်နော်။
နောက်ပြီးတော့ root တာရော မrootပဲ မြန်မာစားနဲ့ google play store အဆင်ပြေအောင် xiaomi phone တွေ power အဲ့လောက်မနည်းပါဘူး။ coc game ကစားလို့ရတယ် ကောင်းတယ်လို့ ပြောလို့မရသေးပါဘူး samurai seige ကိုကစားကြည့်ပါ graphic ဘယ်လောက်ကွာလဲ ထားပါလေ နောက်မှ.......... specificationအကြောင်းတွေထက်ဆွေးနွေးမယ်ဗျာ။ ဘယ်သူဟာပိုပူလဲ Cpu အပိုင်း battery အပိုင်း။ ကယ်ဗျာ စကားလုံးတွေရှည်ကုန်ပြီ။ စာဖတ်ပေးတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေအားလုံး ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ။ စိတ်ရှည်လက်ရှည်နဲ့ အသုံးပြု ကြည့်ပါ။ အဆင်ပြေပါစေ။
How to set your favourite song as your default alarm sound?
ဥပမာ- နှိုးစက်နာရီ မနက်အိပ်ရာထမယ် ။ Date ထားတာရှိမယ်။ ကိုယ်မနက်ထလာလို့ စိတ်ကို လန်းဆန်းစေမဲ့ တေးသံလေး နဲ့ပေါ့။ ကျွန်တော်ကတော့ relaxing music နဲ့ ထားပါတယ်။ ကယ်စမယ်
1. Transfer your song to your phone using the usb cable.
2. Open the clock app, tap the Menu button > set default alarm sound.
3. Tap + and then select the song you want.
ကိုယ်လိုချင်းတဲ့ သီချင်း သို့မဟုတ် တေးသံ ကိုယ့်ဖုန်း memory ကနေလဲအဆင်ပြေပါတယ်။
ပြီးတော့ alarm volume အပိုင်း
1. Open the clock app, tap the Menu button > More setting > Alarm volume.
2. Or.... device's settings, tap sound & vibration, and then adjust the Alarm volume slider....
How to remove the alarm automatically after it goes off?
1. For non -repeating alarms, you can go to their own settings to turn on the delete after goes off switch.
1. Open the Clock app.
2. Go to the Alarm tab, and then tap+
3. When you finish setting the alarm,tap OK.
Alarm label လေးနဲ့ နာမည်ပေးထားလို့လဲရတယ်ဗျာ
How to change the snooze duration?
အဲ့ဒါလေတော့ တစ်ရေးမှေးမယ် မှိန်းမယ် ဆိုတဲ့သူတွေ အတွက်အဆင်ပြေမယ်ထင်တယ်။
2. Tap the Menu button > Morr settings > Snooze duration
3. Pickasnooze duration.
okay , မယ်လိုထင်တယ်နော်။
နောက်တစ်ခုကတော့ timer ပေးမယ်။ ရေကူးကန်မှာ
ရေကူးပြိုင်မယ် timer လေးနဲ့ပေါ့နော်။
How to addapredefined timer?
2. go to the Timer tab , then hit Add timer.
ကိုယ့် data အချက်အလက်တွေ ကိုပြန်ပြီးစီမံမယ် ကိုယ်တွယ်မယ်။ ဓာတ်ပုံ သီးချင်း စာအုပ် ဗီဒီယို ပြန်ပြီး စီစစ်မယ်ပေါ့ဗျာ။
How to copy files or folders?
1. in the explorer app, select the files or folders you want to copy.
2. Tap More >Copy.
3. Open the folder you want the copied items to be saved, and then tap Paste.
Recent . Categories. Storage
Recent, ကျွန်တော်တို့ လုပ်ထားတဲ့ဟာတွေ ပြမယ်။
Categories, ကိုယ်ဘယ်ဟာကိုအသုံးပြု မလဲ
ဥပမာ-အနေနဲ့ file တစ်ခုခု ပြောင်းရွှေ့မှု တစ်ခုခုလုပ်မယ်ဆိုရင့်ဖိထာားမယ်select ဖြစ်သွားမယ် ။ အဲ့တော့ အောက်မှာ့့
Sent , Cut , Delete , More
ကိုယ်အသုံးပြု မဲ့ပုံစံ ကိုယ့်စိတ်ကြိုက်ပေါ့နော်။
sent ကိုတော့ ကြိုက်တယ် တစ်ခါထဲ social chat ကိုတခါထဲပိုလိုရတယ်။
cut ကိုတော့ internal memory ကနေ External memory ပြောင်းမယ် ။
delete တော့ ထုံစံအတိုင်းပေါ့ နော့။ bye bye.
Hide, copy , favorite, Rename, open in another app, details.
2. Go to the Storage tab.
3. Tap the Menu button > Create new folder.
အပေါ်ကစာမှာ Storage tab .
menu နှိပ်လိုက်မယ် sort by....ကတော့ ကိုယ်သုံးမဲ့
စာရင်း မြင်တဲ့ပုံစံပေါ့နော် နေ့စွဲအစီအစဉ်အတိုင်း မိမိစိတ်ကြိုက်ထားပေါ့။ ကျွန်တော်ကတော့ name နဲ့ အသုံးပြု ပါတယ်။
menu နှိပ်လိုက်မယ် Sort by , Create new folder, show hidden files.. ရှိမယ်။
How to move files or folders?
1. In the Explorer app, select the files or folders you want to move.
2. Tap Cut.
3. Open the folder you want the cut items to be moved to , and then tap paste.
ကိုယ်ပြောင်းရွေ့မဲ့files ကို internal storage ကနေ SD card လုပ်တဲ့ပုံစံပါ။ အဲ့ဒါကတော့ အဆင်ပြေကြမယ်လို့ ထင်တယ်။
1. Press the power and volume- buttons at the same time.
2. Open the Toggle panel from the top of the screen, tap the screenshot button.
အဲ့လိုscreenshot လုပ်မယ် MIUI 8 မှာထူးခြားမှု့လေကတော့ တော်တော်များများသိပါတယ်နော်။
screenshot ဖမ်းမယ် ပြီးတော့ ကိုယ်ကလိုချင်တဲ့ web page တစ်ခုလုံးကို screenshot ဖမ်းမယ်ဆိုရင်
web page ရဲ့အစကနေစပေါ့နော်။ ထိုနည်းတူ ကိုယ်လို့ချင်တဲ့ အပိုင်းကနေ အောက်ထိဆွဲချ မယ် မယ်အဲ့လိုမျိုးအသုံးပြု မယ်ဆိုရင်
screenshot လုပ်မယ် ညာဖက်မှာပေါ်လာမယ် ပြီးတော့ edit လေးမျိုးပြမယ်
scroll , send , edit , delete.
အရှည်လုပ်မယ် ဆိုရင် scroll ကိုနှိပ်မယ် လိုချင်တဲ့အထိ အောက်ဆွဲချမယ် စိတ်ကြိုက် ရပြီဆိုရင် Done ပေါ့ဗျာ ပုံရှည်ရင်တော့ processing နည်းနည်းကြာပါမယ် အဲ့လို့ပြီးသွားရင် edit လုပ်လို့ရသေးတယ်ဗျာ။ crop, Doodle ,
နောက်ပြီးတော့ More မှာ
add to album , Hide , set as wallpaper,
set as contact photo , start slideshow, Details. ရသေးတယ်ဗျာ။
ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ social chat တခါထဲပို့လိုရတယ် အဲ့ဒါလေးတော့ သဘောကျတယ်။
နောက်ပြီး edit အပိုင်းမှာ အများကြီးရှိပါတယ်။
Aha.... ထူးခြားချက်လေး တစ်ခါထဲပြောလိုက်မယ်
1. power and volume down key.
2. ပြီးတော့ Toggle panel က screenshot.
3. နောက်တစ်ခုက Recent(Menu)+voldown
4. ပြီးတော့ Recent(menu) + vol up
အဲ့ဒါကတော့ screen အလင်းမြင့်ပေးတဲ့ဗျာ။
How to hide and unhide album.
3. Long tap the album you want to hide, and then select Hide.
4. To unhide an album, go to your device's settings, tap system apps >Gallery
5. Turn on the show hidden albums switch.
6. In the Gallery app, long tapahidden album (album with the dark grey background) , and select unhide.
ကယ် ဓာတ်ပုံ တွေ ဗီဒီယိုတွေ မိမိ personal file တွေ hide လုပ်မဲ့ မိတ်ဆွေတွေ ။
တစ်ခုတော့ ရှိတယ် ပြန်ဖော်တဲ့ အချိန်ကရင့်
Mi Cloud မှာ Gallery မှာ On ထားတဲ့သူဆိုရင်
password ပြန်ပေးမယ။် မိမိ Mi account ပြန်ထဲမယ် ပြီးတော့ အပေါ်ကပြောထားတဲ့အတိုင်း လုပ်ကြည့်မယ် Gallery ထဲက Albums ကိုရွေးမယ်
အောက်ကိုဆွဲချမယ် lockပုံလေးနဲ့ပြမယ် hidden album အဲ့မှာ ဖော်ပြမယ် ပြန်ဖော်ချင်တဲ့ဆိုရင် select ပြန်ပေးမယ် unhide. အားလုံး okay သွားပြီ။
1. From device's settings, tap other accounts.
2. Tap the + button, and then select Google.
3, Followthe on-screen instruction to enter your Google username and password.
How to removeaGoogle account?
1. From your device's settings, top other account > Google.
2. Select the Google account you want to delete. ( if you have more than one Google account signed in.)
3. Tap More > Remove account.
အဲ့ Google account တော့ လွယ်ပါတယ်နော်။
နောက်ပြီးတော့ google play store ။
google installer အားလုံးသိမယ်လိုတော့ထင်တယ်။
အကောင်းဆုံးကတော့ ဘာမှ တခြား google နဲ့ ဆိုင်တဲ့ ဟာမထဲပါနဲ့။
Google services farmework.
Google play service.
Google calendar synchronization service
Google contacts synchronization service.
အဲ့ဟာတွေအားလုံးကို google installer တစ်ခုထဲနဲ့ အကုန်လုပ်မယ် တခြားဟာတွေနဲ့ ဖုန်းထဲမသိပဲထဲ့ရင် ပြန်လုပ်ရင် အလုပ်ရှုပ်လို့ဗျာ။ နောက်ပြီးတော့ တခြားဟာကနေမထဲဖူး သူတို့ china ကဟာနဲ့အသုံးပြု ရင်တစ်ခါထဲနဲ့ အဆင်ပြေတယ်။
Open app store > Search bar မှာ guge လို့စာရိုက်မယ် ။ အောက်မှာခြောက်ခုလောက်ကျလာမယ် ပုံစံက့
အဲ့တော့ 谷歌输入法ရွေးမယ် search နှိပ်မယ်။
မပေါ်လာသေးဘူး။ အောက်ဆုံးထိဆွဲချမယ် ။
Baidu Logo ခြေရာပုံလေးနဲ့ အဲ့မှာ နှိပ်မယ်။
မတွေ့သေးဘူး 谷歌输入法 အဲ့စာလုံးကို အနောက်သုံးလုံးဖြတ်လိုက်မယ် 谷歌. ဆိုတဲ့စာလုံးနဲ့
နောက်ထက် search ထပ်နှိပ်မယ် ။ ပြီးတာနဲ့
Google installer ပေါ်လာပြီ သူတို့စာလုံးက
谷歌安装器 ဆိုပြီးတော့ပြမယ် Install ဆိုပြီးတော့ နှိပ်မယ် 100% ဖြစ်ရင် အားလုံး အဆင်ပြေသွားပြီနော်။
အပေါ်မှာပြောထားတဲ့ google account ကိုထဲတော့ဗျာ။ အဲ့တော့ ဆွဲချင်တဲ့ဟာ play store ကနေဆွဲဗျာ။ အဆင်ပြေပါစေ ။
error. facebook . play store အဲ့ဒါတော့နောက်မှဆက်ပြောမယ်နော်။
How to addawidget onaHome screen.
3. Tap and dragawidget toaHome screen.
magnification ပုံစံလုပ်မယ် အင်အဲ့အကြောင်းလဲ မရေးရသေးဘူး။ အဲ့ဒါနဲ့ .....ဆွဲလိုက်မယ်
Move apps, widgets, wallpaper, Effects.
လေးမျိုးပြမယ် widgets ကိုနှိပ်မယ့့်
အဲ့မှာ Screen ပေါ်မှာ ကိုယ်ထားချင်နဲ့ shortcut keys တွေရှိမယ် ကျွန်တော်ကတော့ cleaner နဲ့ lock
Toggles(19) မျိုး, Settings (13) , clock(4)
Weather (2), notes (2) , calrndar(2), စသည်ဖြင့်ပေါ့ မိမိစိတ်ကြိုက် ထားပြီးသုံးပေါ့နော်။
တကယ်လို့2fingers မသုံးချင်လဲရပါတယ်။
Menu နည်းနည်းကြာကြာလေးနှိပ်ထားမယ် အဲ့လိုလဲဖြစ်တယ့့်
Move apps. တစ်ချက်နှိပ်မယ်
To pick up an app, touch its icon.
ကိုယ်ရွေးမယ် ဘယ် app ကို ဘယ်မှာထားချင်လဲ
ဥပမာ- pages တစ်ခု လေးတန်းရှိမယ် app တွေ
ဒုတိယတန်းထဲက ဒုတိယတစ်ခုကိုရွေးမယ်နောက်အောက်ဆုံး က တစ်ခုထက်ရွေးမယ်။ နှစ်ခုရွေးလိုက်တယ်နော်။ အဲ့နှစ်ခုထဲကတစ်ခုကို ပြန်ထားမယ်ဆိုရင် ဒုတိယတန်းထဲမှာ လွတ်နေမယ် အဲ့နေရာကို အရင်သွားပါမယ်။
နောက်တစ်ခုကတော့ app တွေကိုနေရာ တခြားစီဖြစ် နေတယ် menu ဖိထားမယ် adjust မလုပ်ချင်ဘူး app တွေ တခြားစီဖြစ်နေရင် drage လုပ်ပြီး စမ်းကြည့် ပါ။ app တွေတစ်နေရာစီ တခြားစီဖြစ်နေမယ်။
ဖုန်းကို ခါလိုက် auto ပြန်စီသွားမယ်ဗျာ။ အဲ့ဒါလေးကလန်းတယ်နော်။ မျက်လုံးထဲရှုပ်နေရင် အဲ့ဒါလေးနဲ့က ပြန်တယ်လေ။ ဟုတ်တယ်နော်။
How to setaprimary home screen?
1, Pinchahome screen using3fingers.
2. Tap the Home button of the screen you want to make it as primary.
အခုဟာတော့ မိမိဖုန်းမှာ ဘယ် pages ကို home screen ထားမလဲ။ လက်ချောင်းသုံးနဲ့ ဆွဲလိုက်မယ် scrren ပေါ်မှာ။ အဲ့ဒါဆိုရင် ကိုယ်ထားချင်တဲ့ first page မိမိစိတ်ကြိုက်ပေါ့နော်။
How to addahome screen?
2. Swipe left or right until you sera+ button. Tap the + button.
3. When your done, tap the back button to exit the editong mode.
ဒါကတော့ ကိုယ်သုံးမယ် နောက်ထက် page ထက်တိုးမယ် ။ လွယ်ပါတယ်နော် စမ်းကြည့်ပါ။
How to change the screen transition?
1, Pinchahome screen using2fingers.
2. Tap Effects.
3. Select an Effect.
ဒါလေးကတော့ ကိုယ်သုံးတဲ့ သက်ရောက်မှု ပုံစံ ကိုယ်ဘယ်လိုပုံစံ မျိုးကြိုက်လဲ စိတ်ကြိုက် ထားပါ။
How to addaclock to your Home screen?
1. PinchaHome screen using2fingerd.
2. Tap Widgets > Clock
3. Tap and drag the clock you want to an empty section ofaHome screen.
ဒါကတော့ အပေါ်ကအတိုင်းပါပဲ ကွန့်ပြီးတော့ သုံးလို့ ရပါတယ်။ ဖြစ်နိုင်ရင်ပေါ့နော် ကိုယ်သုံးမဲ့ ဟာပဲသုံးစေချင်တယ်။ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပေါ့။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ cpu တွေအလုပ်လုပ်နေရတဲ့ အဲ့အတွက် ဖုန်းလေးတယ်ဗျာ။ လှတယ်ကြည့်ကောင်းတယ်အဲ့ဒါလေပဲကြိုက်တယ်ဆိုတော့သုံးပေါ့နော်။ game အကြီးတွေ ကစားရင် စကားပြောလာရော။
How addaflashlight on/off button to your Homr screen?
1. Pinchahome using2fingers.
2. Tap widgets > Toggles > Touch.
screen ပေါ်မှာထားလဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့လိုမှမထားချင်လဲ lock screen ဖြစ်အောင်တစ်ချက်နှိပ်မယ် ပြန်ဖွင့်မယ် Home key ဖိထားမယ် flashlight လင်းလာမယ် ။
flashlight ကို မီးလေးထွန်းပြီးသုံးမယ်ဆိုရင်
power key တစ်ချက်နှိပ်မယ် ။ ပြန်ပိတ်မယ်ဆိုရင်
power key နောက်တစ်ကြိမ် နှိပ်ရင် ပိတ်သွားပါ မယ်ဗျာ။
နောက်ဆက်ရန် to be continue。。。。。。
Credit to ==> Mi official myanmar